Mandosira ny mahazatra miaraka amin'ny fitsangatsanganana iray andro ao amin'ny Redhills Adventure Kildare. 5kms monja no misy an'i Kildare Village, 30 minitra avy amin'ny Newlands Cross any Dublin ary adiny 1 miala an'i Athlone, Kilkenny ary Carlow, Redhills dia tonga 'tsy maintsy atao' amin'ireo olona mandeha manerana an'i Irlandy hitsidika / lalao amin'izy ireo.
Redhills Adventure dia mikendry (tsy misy pun) natao hanolorana anao andro feno fihetsika miaraka amina karazana hetsika tsy mitovy amin'ny mahazatra, mahafinaritra ary azo antoka. Ny hetsika dia fitsangatsanganana an-tany izay mety amin'ny ambaratonga sy ny fahalianana rehetra. Ny traikefa dia tsy mitovy arakaraka ny taonan'ny olona na ny karazana hetsika ohatra ny fananganana ekipa fanamby izay ilana fahaiza-manao ara-tsaina mifanohitra amina hetsika fanaovana tag izay ilana fiezahana ara-batana.
Safidio ny traikefa nahafinaritra anao avy amin'ny hetsi-panoherana misy fiatraikany ambany mba hikendrena fahafinaretana eny an-tsena na zahao ny làlan'ny fanafihana sy ny hetsika fananganana ekipa. Tsy misy vondrona? Tsy misy traikefa? Tsy misy fitaovana? Tsisy olana. Redhills Adventure Kildare dia mikarakara ho an'ny olona ary koa vondrona avy amin'ny mpandray anjara 8 ka hatramin'ny 150 ho an'ny taona 8 ka hatramin'ny avo!
Sokafy mandritra ny taona rehetra, ny alatsinainy ka hatramin'ny alahady ho an'ny famandrihana vondrona mandritra ny valo na mihoatra ary afaka miditra amin'ny fotoana filalaovana lalao open tag isaky ny faran'ny herinandro ny olona ka tsy mila vondrona ianao.
Ny tanjon'ny Redhills Adventure dia ny fialan'ny mpanjifany fahafaham-po noho izy ireo nanana andro mahafinaritra, mpanafika, adrenalinina nifanentana tamin'ny fahaizany, ny fahaizany na ny haavon'ny fandraisana anjara.
Redhills Adventure dia mikarakara ny -
• Fianakaviana, namana, fitsingerenan'ny andro nahaterahana (7+ sy olon-dehibe)
• Fitsangatsanganana an-tsekoly (8-12 taona)
• Stag sy Hen
• Fananganana orinasa sy ekipa
• Mpankafy fialamboly (12 taona +)
• Fanatanjahan-tena sy fahatanorana - Skotisma sy fitarihana, vondrona tsy mahasoa, fiaraha-miasa amin'ny fanatanjahantena Kildare, GAA, Soccer, ekipa baolina lavalava alohan'ny vanim-potoana.
Adventure sy hetsika, Outdoors, Fianakaviana ankohonany, Kildare
Alakamisy - Masoandro: 10 maraina - 5 hariva